पोखरामा यस्तो पनि हस्पिटल यि सुत्केरीको मृत्यू भएको ७ दिनसम्म बेहोस भएको भन्दै पैसा अशुलीरह्यो ! « तात्तातो खबर
पोखरामा यस्तो पनि हस्पिटल यि सुत्केरीको मृत्यू भएको ७ दिनसम्म बेहोस भएको भन्दै पैसा अशुलीरह्यो !
विरामी मरेको ७ दिनसम्म पनि विरामीको उपचार गर्न भन्दै दिनहु ४० देखि ५० हजारको औषधी आफ्नै फार्मेसीबाट मगाउँथ्यो यो अस्पताल । क्रिपया सेयर गरेर सम्पूर्णको वालमा पुर्याईदिनुहोस ता कि भोली कसैलाई यस्तो संकट नआओस !
सुत्केरीको ज्यान गएपछि आक्रोशित आफन्तले अस्पताल अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रबारदेखि नै आन्दोलित उनीहरु शनिबार मध्यान्ह नयाँबजार सडक नै बन्द गरी टायर बालेर अस्पताल, प्रशासन र प्रहरी विरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिए ।
साभार: तनहु पोस्ट